Xaalad ba'an: Maxaa ku dhacaya hormoonnada haweenka ee ka weyn sanadaha 40? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD "Weyneyn weyn: Maxaa ku dhacaya hormoonnada haweenka ee sanadaha 40?
Dhamaan gabdhuhu way ogyihiin inta ay leegyihiin hoormoonka wuxuu noqon karaa mid saameyn lehmarka ay dhalinyaradu bilaabaan inay dareemaan isbedel niyadjab ah isla marka ay haystaan ​​mudadooda koowaad. Xilliga uurka, tan "Ufeaval" Hormoonku wuxuu xitaa joogaa oo wuxuu u eg yahay coaster coler. Kadib 40 ka dib, iyada oo jirku horeyba u bilowday inuu u diyaar garoobo xinjiro, hormoonnada ayaa mar kale u dhaqdhaqaaqaya, iyagoo siinaya raaxo darro haweenka. Maxaa dhab ahaan u dhacaya iyaga? Aan u ogaato.
Astaamaha indho shareerka ee haweenka ku jira sanadaha 40
Ka dib noloshii barkada, isbedelka ku dhacay hormoonnada haweenku waa lama huraan. Haddii aad la kulanto dabayaaqad macquul ah ama qaab halis ah, waxaad aad u nasiib badan tahay. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii calaamadaha aan la dabooli Karin, muhiim maahan in la xanibo sababta oo ah waxaa jira daawooyin badan oo suuqa ku yaala oo u maleynaya in lagu ilaaliyo dheelitirka hormoonkaaga oo aad isku dejiso. Markaa maxaa dhacaya marka qof dumar ah la gaaro karantiil?
Dheef-shiid kiimikaadka ayaa hoos u dhacaya.
Libido ayaa hoos u dhacaya.
Tirada muruqyada ayaa hoos u dhacda.
Cufnaanta lafuhu way yaraysaa.
Dareemida cadaadiska iyo niyad-jabka ayaa kordhaya.
Waa lagama maarmaan in la fahmo in calaamadahaasi aysan dhammaantood muuqan. Isbeddelada isbedbeddelka ayaa si tartiib ah u dhacaya Waxaa jira xitaa mudo sanado ah ka hor inta aan cisbitaalka la joojin: peri-dayska. Oo waxaad horay u dareemi kartaa isbeddelka muddadan. Si kastaba ha noqotee, calaamadaha oo dhan ma muujinayaan dumarka oo dhan - dhamaanteen waan nahay.
Maxaa ku dhacaya hoormoonka?
Waa hormoon haweenka ugu muhiimsan, kan ka masuulka wareegga caadada, horumarinta xubnaha taranka iyo sameynta sifooyinka galmada dibadda. Marka haweenka da'doodu ka weyn tahay 40 ay la kulmaan dhibaatooyinka caadada koowaad (hakad, marxalado), tani waxay la xiriirtaa hoos u dhaca estrogen.
Taas bedelkeeda, koritaanka hormoonada walbahaarka ayaa ka dhigaysa haween u nugul cadaadiska dareenka (niyadjab, argagax). Kordhinta waxay kaloo keenaysaa kor u kaca sonkorta dhiigga.
Hoormoonkan ayaa mas'uul ka ah qiyaasaha noolaha; Marka, marka ay hoos u dhacdo, waxaad yeelan kartaa dhibaato hurdo.
Waxay mas'uul ka tahay uurka. Marka, marka heerkoodu hoos u dhaco, hawsha bacriminta ayaa sidoo kale hoos u dhacda. Dhibaatadu waxay sidoo kale keeni kartaa qallal xinjireedka, taas oo keenta raaxo la'aan iyo xanuun inta lagu jiro galmo.
Tani waxay u badan tahay in hormoonka labka ah ee dumarka ay masuul ka tahay dabacsanaanta. Sidaa daraadeed, hoos u dhaca wuxuu keeni karaa dhimashada libido iyo xanuunka caloosha. Waxaa laga yaabaa inaad dareentid tabar-dari, iyo sidoo kale dhibaatooyin la xiriira cufnaanta xididada.
Haweeney ka weyn da'da 40 waa inay diyaar u ahaato inay wajahdo caqabadaha hormoonnada u diyaarinaya iyada. Xusuusnow in tani aysan ahayn sabab looga dhigo quus, sababtoo ah "Ka hortagga waa ka fiican yahay daaweynta! ". La tasho dhakhtarkaaga dumarka wixii talo ah ee ku saabsan sida loo daweeyo calaamadaha kala duwan. Ha illoobin farriimaha jirkaaga. Caafimaadkaaga sii joog.
Cute Lamaanahan qurxoon wuxuu lahaa wiil cajiib ah oo qurux badan oo run ahaantii noqon doona Romeo run ah